» हिउँ खेल्न सिम्भञ्ज्याङ् जाँदै हुनुहुन्छ ? ‘ईच्छापूर्ण’ नामक होटेलदेखि सावधान !
हिउँ खेल्न सिम्भञ्ज्याङ् जाँदै हुनुहुन्छ ? ‘ईच्छापूर्ण’ नामक होटेलदेखि सावधान !
२०७५ माघ १३,आईतवार ०७:२०
मकवानपुर १३ माघ । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा हिँउ खेल्ल जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँका होटेल व्यवसायीदेखि सावधान । खानाखानु पहिले होटेलको सरसफाई र मुल्य पहिलेनै तय गरेर मात्रै खानुस् नत्र फस्नुहुन्छ ।
हिमपात पश्चात सिम्भञ्ज्याङका होटल व्यवसायिहरुले ब्रम्हलुट मच्चाईरहेका छन् । अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको चहलपहल अत्याधिक बढेको छ । तर यहि मौकामा होटल व्यवसायीहरुले चौका हानिरहेका छन् । अन्य समयको तुलनामा सर्वसाधारणसंग खानाको दोब्बर मुल्य अशुल्न व्यस्त छन् होटल व्यवसायी ।
शनिबार हेटौंडाबाट हिँउ खेल्न भन्दै संचारकर्मीहरुको टोली र नँया पाईला नामक सामाजिक कार्यमा कामगर्ने टोली सिम्भञ्ज्याङको ईच्छापूर्ण होटलमा खाना खान भन्दै पुग्यो । अन्य समयमा खाना खाएको १ सय २० देखि १ सय ७० सम्म लिने होटेलले उक्त टोलीलाई शनिवार साधारण खानाको २ सय माशु खानाको ३ सय ५० मागेपछि टोलीले प्रश्न गर्यो खानाको मुल्य किन यत्ति महँगो ? होटेलका संचालकले जवाफ दिए खाना खाएपछि पैसामा किचकिच किन गरेको ?’ ।
खानाको गुणस्तर र होटेलको स्तर अनुसार खानाको मूल्य महँगो हुनसक्छ तर अघिपछिको तुलनामा दोब्बर मुल्य असुल्न थालेपछि अहिले उक्त होटेलमा पुग्ने अधिकाँशको गुनासो आइरहेको छ ।
खानाखान पुगेका टोली मध्येका एक करपबहादुर रुम्बाले भने ‘ मैंले साकाहारी खाना मागें र खान थाँले , खानामा तरकारीभित्र मासुको चोक्टा भेटियो । अनि मसलाको प्याकेटपनि । मैंले किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न गर्दा होटेलका संचालकले मसलाको प्याकेट र मासु फालेर खान आग्रह गरे । ’ करपबहादुर रुम्बाले तु खबरसंग भने । संचारकर्मी दिलबहादुरु रुम्बा पनि यहि गुनासो गर्छन् । नयाँ पाईलाकी प्रतिनिधि मन्जु मैनालीले साकाहारी खानामा मासुको चोक्टो भेटेपछि घिनलागेर खाना प्यालिन् । अनि नयाँ पाईलाकै भुवन घलानले भान्साको घिनलाग्दो अवस्था देखेपछि खाना खाननै रुचाएनन् । तर होटेल व्यवसायीले भने पैसा दोबारेर नै लिए ।
ईच्छापूर्ण होटेल ल प्रतिनिधि होटेलमात्रै हो । अन्य होटेल व्यवसायीले पनि यही अवसरमा आफ्नो कमाउधन्दा शुरु गरेका छन् । गुणस्तरहिन खाना बेचिरहेका छन् । अझ बस्न गेष्ट हाउसमा पुग्दा भाडा सुनेर आत्तेसनै लाग्छ । सिम्भञ्ज्याङ पुगेका पर्यटकहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ‘ होटेल व्यवसायीको ब्रम्हलुट कहिलेसम्म ?’